शा'री'रिक स'म्पर्क गर्नु अगाडि सभामुख महराले पि'एको म'दि'राको मूल्य कति ? - Sidha News
शा’री’रिक स’म्पर्क गर्नु अगाडि सभामुख महराले पि’एको म’दि’राको मूल्य कति ?
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद सचिवालयकी महिलासँग ज’ब’रज’स्ती शारीरिक स’म्पर्क गर्नु अगाडि म’दिरा से’वन गरेको खुलासा भएको छ ।
हाम्राकुरा नामक अनलाइनका अनुसार सभामुख महराले संसद सचिवालयकी ती महिला कर्मचारीलाई आइतबार साँझ शा’री’रिक स’म्पर्क गर्ने क्र’ममा म’दिरा से’वन गरेको खुलेको हो ।
म’दिरा पिएर आफै बोतल बोकेर ती महिला कर्मचारीको डेरामा भित्रिएका महराले स्न्याक्सपनि साथमै लगेर गएका थिए । दुई वटा गिलासमा म’दिरा राखेपनि महराको द’वावमा ती महिला कर्मचारी र महराले एउटै गिलासमा म’दिरा सेवन गरेका थिए ।
ती महिला र सभामुख महराले बाेतलकाे म’दिरा आधा सिध्याएका थिए ।
त्यसपछि महराले ती महिला कर्मचारीलाई कोठामा रहेको खाटमा सुताएर जबरजस्ती शा’रीरिक स’म्पर्क गरेको ती महिलाले बताएकी छिन् । त्यति मात्रै होइन सभामुख महरा ती महिला कर्मचारीलाई कुटपिट गर्नुका साथै मुख च्या’त्ने प्रयास गरेका थिए ।
यो घटनाको जानकारी ती महिला कर्मचारीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद नेतृहरू पम्फा भुसाल र अनेसरी घर्तीका साथै महराका कान्छो छोरा राहुल महरालाई पनि जानकारी गराएको ती महिला कर्मचारीले बताएकी छिन् ।
महराले ती महिला कर्मचारीलाई घटना बाहिर नल्याउन पटक पटक दवाव दिएको पनि खुलेको छ ।
महराले १२ वर्ष पुरानो ‘हिमालयन रिजर्भ ह्वीस्की’ पिएर आफूलाई काठमाडौंको तीनकुनेस्थित डेरामा जबरजस्ती शा’री’रिक स’म्पर्क गरेको ती पी’डि’त महिलाले बताएकी छिन् ।
आफूलाई महराले ज’बरज’स्ती शा’रीरिक स’म्पर्क गरेपछि उनले घरबेटीलाई भनेकी थिइन् । त्यसपछि तीनकुनेको प्रहरीलाई खबर गरिएको ती महिलाले बताएकी छिन् । प्रहरीले कोठाको फोटो खिचेर लगेपनि यस घ’ट’नाबारेमा अन’भिज्ञता जनाएको छ ।
सभामुख महराले ती महिलासँग पिएको र’क्सीको मूल्य न्युनतम २४ देखि २८ सयसम्म पर्छ । यो मूल्य ७५० एमएलको बोतलको दररेट हो ।
४२.८ प्रतिशत अ’ल्कोहल मिसिएको यो म’दिरा १२ वर्ष पुरानो ब्राण्डको छ । स्क’च माल्ट क्वालिटीको यो म’दिराको स्प्रि’ट स्कटल्याण्डबाट ल्याएर हिमालको पानी मिसाएर बनाउने गरिएको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
उता, सभामुख महराले आफूलाई लागेको आ’रोप झु’ठ्ठा रहेको दा’बी गरेका छन् । कर्मचारी समायोजनको रिस ती महिलाले पोखेको महराको भनाइ छ ।